China YASKAWA Robot Brick Stacking mpanamboatra sy mpamatsy | Bricmaker
Tamin'ny 2008, BricMaker dia nitazona ny hafainganam-pandehan'ny haitao, nampidirina herinaratra SEW hiasa ho an'ny motera, motera servo, singa pneumatika SMC Japan, fehikibo syndrika italy Magodi, Robot mandroso eran'izao tontolo izao an'ny Robot FANUC, YASKAWA, KAWASAKI, KUKA ary Alemà Siemens PLC ny ampahany betsaka amin'ny elektronika rafitra, niditra tamin'ny vanim-potoanan'ny mekanika automatique intelligence.
Nanangana vondrona manam-pahaizana manokana izahay ho an'ny R&D rafitra fanapahana-fanangonana-fametrahana azy ho azy. Robot ho toy ny masinina farany tompony, hiantohana ity haino aman-jery mandroso ity, nampiditra robot avy tany Japon sy Allemana izahay, ary ny marika YASKAWA sy KUKA. Ary noho ny fivoaran'ny tsena anatiny teo aloha, dia nanjary nalaza kokoa ny fametrahana robot noho ny fananganana robot. Koa satria ny tombony azo avy amin'ny manovaova, azo itokisana, tsotra ary tian'ny mpanamboatra biriky maro kokoa.
asa Fametahana biriky / sakana sy fitaterana
Fitsipika miasa Fanaraha-maso automatique PLC
Faharetana 10-15 taona
Fahazoana ny fahafaha-manao
Pcs / ora
a) malefaka: toerana fiasana kely kokoa, ary tsy misy fetran'ny velaran-tany. Mora kokoa amin'ny fanovan'ny orinasa biriky taloha ny fametrahana robot automation.
b) MAHOMBY: 4 hatramin'ny in-6 isa-minitra amin'ny fametahana fiara sy fitaterana fiara. Ary isaky ny mametaka ny biriky hatramin'ny 84 ka hatramin'ny 144 pcs biriky dia mamonjy herinaratra bebe kokoa.
c) marin-toerana: saika tsy misy intsony ny takiana amin'ny fitazonana, fanadinana ambany be. Ny hafainganam-pandehan'ny fitehirizana dia miorina, ary afaka miasa tsy tapaka mandritra ny fotoana lava izy io, tsy toy ny volavolan-dalàna kaody izay hanelingelina ny anton-javatra maro samihafa.
d) Fanamiana: Ny lamina apetrak'ireo banga amin'ny fametahana robot dia tena milamina sy mitovy, ny hadisoana dia mety tsy mihoatra ny 1mm, ary ambany dia ambany ny mety ho banga.
Seranan-tsambo fanaterana Shanghai, Sina
Fotoana fanaterana 45 Andro
Terms Terms EXW, FOB, DAF, CFR, CIF
Fepetra fandoavana T / T, L / C, D / P, Western Union, PayPal
Fonosana Dustproof, tsy azo atsofoka, Quakeproof
Fanamarinana Bureau Veritas, CE, ISO9001, OHSAS18001
Taratasy niandohana Japana
Teo aloha: JKY75 / 65EIII IV-4.0 Vacuum Extruder
Manaraka: KAWASAKI Robot Brick Stacking
Rafitra fametahana biriky indroa miorina amin'ny robot